एक काम आवेदन लागि पत्र कवर उदाहरण | USAHello | USAHello
तपाईं एक काम को लागि आवेदन कभर पत्र लेख्न तयार छन्? यो पृष्ठमा, तपाईं पछ्याउन एक ढाँचा र दुई आवरण पत्र उदाहरण पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं आफ्नो आवेदन अनुरूप शब्द मा पत्र कवर उदाहरण डाउनलोड र तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछ.
प्रयोग गर्न राम्रो ढाँचा - पत्र उदाहरण कवर
पहिलो सबै काम आवेदन आवरण पत्र लागि राम्रो काम गर्छ भन्ने आधारभूत ढाँचा हेरौं. तपाईं यो ढाँचा निम्न तपाईंको आफ्नै आवरण पत्र सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ.
[तपाईंको सम्पर्क जानकारी]
सडक ठेगाना, शहर, राज्य, जिप कोड
[कर्मचारी सम्पर्क जानकारी]
प्रिय Mr./Ms. [थर],
तपाईं लेखन किन आफ्नो पत्रको पहिलो अनुच्छेद भन्नुपर्छ. तपाईं को लागि लागू गर्दै स्थिति उल्लेख. एक आपसी सम्पर्क को नाम समावेश, तपाईं एउटा छ भने. हुन तपाईंको अनुरोध सन्दर्भमा स्पष्ट र संक्षिप्त. पहिलो अनुच्छेदमा आफ्नो लक्ष्य तिनीहरूले तपाईं को लागि सोध्दै हुनुहुन्छ साक्षात्कार वा नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पाठक विश्वस्त छ.
आफ्नो आवरण पत्र को अर्को खण्डमा तपाईं कर्मचारी प्रस्ताव के वर्णन गर्नुपर्छ. आफ्नो क्षमता र कर्मचारी आवश्यकता बीच कनेक्शन शो.
तपाईंको पत्र पढ्न सजिलो छ भनेर तपाईं धेरै छोटो अनुच्छेद वा गोलीले भन्दा पाठ को एक ठूलो ब्लक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं धेरै अनुच्छेद प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, बरु तपाईंले पहिले नै यो दोहरो भने के दोहर्याउँदै को नयाँ जानकारी थप्न प्रयास. यदि सम्भव छ भने उदाहरण तपाईंको बयान समर्थन.
स्थिति लागि विचार लागि कर्मचारी धन्यवाद द्वारा आफ्नो आवरण पत्र निष्कर्षमा पुग्न. तपाईं कम्पनी रुचि किन बारेमा केही जानकारी समावेश. तपाईं तिनीहरूलाई देखि सुनवाई र स्थिति बारे थप कुरा गर्न तत्पर कि उल्लेख.
भवदीय / दयालु सादर / संग शुभकामनाहरु [यी कुनै पनि एक चयन]
[आफ्नो हस्ताक्षर यहाँ को लागि ठाउँ]
[तपाईंको टाइप नाम]
अब केही नमूना पत्रहरूमा माथिको ढाँचा लागू गरौं. तल आवरण पत्र उदाहरण को एक आवश्यक व्यावसायिक योग्यता काम को लागि उपयुक्त छ. कवर पत्र उदाहरण को दोस्रो प्रविष्टि-स्तर काम वा एक आवश्यकता छैन कि गर्दैन व्यावसायिक कौशल लागि थप उपयोगी हुनेछ.
पत्र उदाहरण कवर - एक पेशेवर काम को लागि एक नमूना पत्र
यहाँ आवश्यकता व्यावसायिक योग्यता वा प्रशिक्षण काम को लागि एक नमूना पत्र छ. यो माथिको ढाँचा निम्नानुसार. को पाठ्यक्रम, तपाईं र तपाईंको काम आवेदन फिट गर्न शब्दहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक हुनेछ. तर यो कसरी तपाईं एक पत्र मा ढाँचा प्रयोग गर्न सक्छन् देखाउँछ.
Lousville, केंटकी, 98776
456 पश्चिम 3rd एवेन्यू
म TRP टेक मा एक बिक्री प्रबन्धक खोजिरहेको छ कि हेर्न उत्साहित थियो. म यो मौका धेरै इच्छुक छु र विश्वास छ कि सफ्टवेयर बिक्री मा मेरो योग्यता, ग्राहक सेवा, र व्यवस्थापन अनुभव मलाई स्थिति को लागि एउटा बलियो उम्मेदवार बनाउन.
म आफ्नो लक्ष्य सम्म पुगन मा बिक्री लक्ष्य पुग्नु र टोली mobilizing बलियो ट्रयाक रेकर्ड संग घमन्डी र अनुभवी पेशेवर हुँ. मा 2016, म मेरो बिक्री लक्ष्य पार 20% हाम्रो कम्पनी एक अधिग्रहण र धेरै उच्च कर्मचारी कारोबार समय मार्फत जाँदै बेला.
तिमी मेरो संलग्न रिजुम बाट देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, म भन्दा बढी छ 10 अनुभव वर्ष बहुसांस्कृतिक टोली प्रबन्ध. म पनि भर्ती मा महत्वपूर्ण अनुभव, साक्षात्कार, र बिक्री रणनीति.
जब म Mogul.com एक बिक्री निर्देशक थियो, म नवीन रणनीति र निर्माण भागीदारी विकास र कार्यान्वयन. यो सबै गरेको बेला प्रमुख र छ कर्मचारीहरु को एक टीम प्रशिक्षण. म अझै पनि आठ वर्ष पछि कम्पनी द्वारा प्रयोग गरिन्छ कि एक अनबोर्डिङ प्रशिक्षण योजना.
म दृढ म आफ्नो टोलीलाई एक मूल्यवान सम्पत्ति हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन्. म कडा आफ्नो समुदायमा लगानी गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता रूपमा नवीनता गर्न TRP टेक गरेको प्रतिबद्धता पराउँछु र राम्रो. म यो स्थिति छलफल गर्न मौका स्वागत, र म मेरो अनुभव TRP टेक यसको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्न लाभ प्यार थियो.
आफ्नो विचार को लागि अग्रिम धन्यवाद. म तपाईकाे जबाफकाे प्रतिक्षामा रहनेछु.
पत्र उदाहरण कवर - प्रविष्टि-स्तर काम को लागि एक नमूना पत्र
यहाँ आवश्यक छैन भनेर गर्दैन व्यावसायिक योग्यता वा प्रशिक्षण काम को लागि एक पत्र कवर उदाहरण हो. यो नै ढाँचा निम्नानुसार. फेरि, तपाईं र तपाईंको काम आवेदन फिट गर्न शब्दहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक हुनेछ. तर यो कसरी तपाईं काम को कुनै पनि प्रकारको लागि ढाँचा प्रयोग गर्न सक्छन् देखाउँछ.
123 ROSEWOOD एवेन्यू
लेक्जिङटन, केंटकी 99123
प्रिय सुश्री. Siberry,
म विलो क्रीक प्राथमिक एउटा प्रशासनिक सहायक राखने छ देखे. म मेरो काम अनुभव र सीप काम को लागि मलाई ठूलो उम्मेदवार बनाउन लाग्छ. म झोउ Xun तपाईंलाई उल्लेख थियो, जसको छोरा आफ्नो स्कूल जान्छ.
म अनुभव तीन वर्ष कार्यालय मा काम छ. म आर्थिक विश्लेषकहरूले समर्थित छन् र विद्यालय मा काम गरेको छ. Beijin Huwien स्कूल मा मेरो समयमा, म भन्दा बढी को रेकर्ड राखिएको 1,000 विद्यार्थी संगठित. म फाइलहरू अद्यावधिक धेरै दिन. पनि, म दुई विद्यालय fundraisers र नृत्य योजना मदत.
मा चीन वित्त अनलाइन कं एक प्रशासनिक सहायक रूपमा मेरो अन्तिम काम मा, म फोन जवाफ र अतिथिहरूको स्वागत. म एक टोली हाम्रो मासिक रिपोर्ट र तय सभाहरूमा मुद्रित 20 हरेक हप्ता. म पनि लिएर बैठक टिप्पणीहरू र ह्यान्डल यात्रा आरक्षण बाहिर पठाइएको. म यी सबै सीप तपाइँको जस्तै व्यस्त कार्यालयमा उपयोगी हुनेछ लाग्छ.
म आफ्नो विद्यालयको बलियो पाठ्यक्रम बुझ्न. म आयोजन मेरो कौशल लाग्छ, दाखिला, र अनुसन्धान तपाईंको कर्मचारीलाई एक विशाल मद्दत हुनेछ. म मेरो रिजुम वरिपरि बार लाउनु र बैठक गर्न तत्पर र यो स्थिति कुरा.
धन्यवाद र म तपाईंलाई बाट सुन्ने आशा.
कवर पत्र उदाहरण डाउनलोड
तपाईंले यी आवरण पत्र उदाहरण डाउनलोड गर्न सक्छन्. जब तपाईं लिंक क्लिक गर्नुहोस्, कागजात स्वतः तपाईंको डाउनलोड फोल्डरमा जाने. यो टेम्प्लेट शब्द हो. के तपाईं लागू गर्न शब्दहरू परिवर्तन गरेर आफ्नो आवरण पत्र को लागि एक आधार तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. अब आवरण पत्र उदाहरण डाउनलोड.